Ururka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen deegaan ka tirsan Somaliland - Awdinle Online
Ururka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen deegaan ka tirsan Somaliland
November, 19, 2019 (AO) – Kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen deegaan ka tirsan Somaliland, gaar ahaan gobolka Sanaag Bari oo dhawaan la sheegay in lagu arkay xooggaga Kooxda Al-Shabaab.
Warkan oo ay ku shaaciyeen bog ay ku leeyihiin baraha Bulshadu ay ku xiriirto ayeey ciwaan uga dhiggeen ”Al-shabaab oo qabsatay deegaankii ugu horeeyay ee istiraatiijiya oo ka tirsan Maamulka Somaliland” ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday sawiro ay ku sheegeen dagaalamayaashooda oo gudaha u soo galaya deegaanadaas.
Afhayeenka dhinaca howlgalada u qaabilsan Al-shabaab Cabdicasiis Muscab ayaa sheegay in ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Gacan Maroodi oo ka tirsan gobolka Sanaag bari.
Saraakiisha Amniga gobolka Sanaag ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo deegaanka lagu arko dagaalamayaasha Kooxda Al-shabaab oo la sheegay in ay ka talaabeen dhinaca Buuraha Golis ee gobolka Bari.
ilaa iyo hadda ma jiraan wax war ah oo ay ka soo saareen Maamulka Somaliland warkan ku saabsan in Kooxda Al-shabaab ay la wareegeen deegaan ay ka taliyaan.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo beenisay in mashruucii biyo xireen dowladda Talyaaniga lanoqotay
Next articleDowlada Masar Oo Taageertay Heshiiskii Uhuru Iyo Farmaajo